HG Wells. Icheta nnukwu onye edemede akụkọ sayensị Bekee | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
HG Wells. Icheta nnukwu onye edemede edemede sayensị England
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | akụkọ sayensị emeghị eme, Ndị edemede, Egwu efu, Novela
Foto HG Wells nke George Charles Beresford sere.
Ọ bụ Herbert George Wells Ọ nwụrụ na August 13, 1946 na London. Enwere m 79 afọ na ọ bụ ọkọ akụkọ ihe mere eme, ọkà ihe ọmụma, na ikekwe kasị ama English edemede nke sayensị akụkọ ifo, bu ụzọ nke ụdị ahụ. Anyị niile agụọla ụfọdụ ọrụ ya ma ọ bụrụ n’abụghị, anyị ahụla ha n’ọtụtụ na-enweghị ike ịgụta ọnụ mmegharị ihe nkiri nke a emeela kemgbe ọtụtụ afọ.
Taa, m na-echeta oge ochie a na ụdị ụfọdụ Nkebi ahịrịokwu site na 4 nke akwụkwọ akụkọ ya kacha mara amara: Oge Igwe, Agha nke Worldwa, Agwaetiti Dọkịta Moreau y Nwoke anaghi ahu anya. M na-enyocha mmegharị ihe nkiri ndị ahụ.
1.1 Oge igwe
1.2 Agha nke swa
1.3 Agwaetiti Dọkịta Moreau
1.4 Nwoke anaghi ahu anya
2 Kedu nke ị ga-edebe?
Amụrụ Bromley, na Kent County, ọ bụ nwa nwoke nke atọ nke ezinụlọ dị ala na-elekọta na ha nwere ezigbo agụmakwụkwọ.
Mgbe a ihe mberede Ọ manyere ya ka ọ dinara n’elu akwa nwa oge, were ohere ahụ gụọ ọtụtụ, nke mere ka ọ chọọ ide ihe. Mgbe ahụ ọ butere ya ụkwara nta ọ gbasikwara mbọ ike ide ihe. Ọ bara ụba ma na-arụ ọrụ ya niile site na nnukwu nkwenye ndọrọ ndọrọ ọchịchị.
Ọ kwadoro nke ahụ sayensị na agụmakwụkwọ ha ga-abu ogidi abuo nke obodo nke odinihu mmadu gha agha ighari.
En 1895 bipụtara Oge igwe, nke mbu dika usoro na emesia dika akwukwo na ya ihe ịga nke ọma ọ bụ ozugbo. O si ebe ahụ kee ha agbụ. N'afọ ahụ ọ bipụtara Nleta magburu onwe ya, na n’afọ atọ ndị na-eso ya akwụkwọ akụkọ atọ mere ka ọ dịkwuo ùgwù: The Island of Doctor Moreau, Nwoke A Na-ahụ Anya y Agha nke swa.
Iwu okike nke anyi na echezo bu na ọgụgụ isi bu ugwo maka mgbanwe, ihe egwu, na enweghi obi iru ala ... Okike adighi emetuta uche rue mgbe omume na mmuo abaghi ​​uru. Enweghị ọgụgụ isi ebe enweghị mgbanwe na ọ dịghị mkpa maka mgbanwe. Naanị anụmanụ nwere ọgụgụ isi ga-anagide ọtụtụ mkpa na ihe egwu dị iche iche.
Ike bụ nsonazụ nke mkpa; nchekwa na-ewepụta ihe nrite maka adịghị ike.
Ikekwe ịmụ iji rụọ ọrụ nke igwe obi ike, ịga njem n'otu ntabi anya na ndụ ozugbo, ịchọta site n'oge ruo n'oge paradaịs dị nkenke na-enweghị ọdịnihu ma ọ bụ n'oge gara aga, na-enweghị mkpuchi abụọ nke agụụ na ụjọ.
Nweghị ike ịga n'ụzọ ọ bụla n'oge, ị nweghị ike ịgbapụ ugbu a.
O nwere ike ịbụ na ihe nkiri a kasị mara amara na akụkọ a (na nke kachasị amasị) bụ nke ahụ kpakpando Rod taylor en 1960 nakwa na ọ meriri Oscar maka mmetụta kachasị mma kachasị mma. Nke ikpeazu sitere n’afọ 2002 ma ghaa Guy Pierce na Jeremy Irons.
Agha nke swa
N'ụbọchị, anyị na-arụsi ọrụ ike na omume anyị dara ogbenye nke na ọ dị anyị ka ọ gaghị ekwe omume nye onye nọ ebe ahụ ịlele nzọụkwụ anyị anya, na-arụsi ọrụ ike ma na-arụ ọrụ nke ọma, na-eme atụmatụ mmeri nke ụwa. Naanị abalị nwere ike, ya na ọchịchịrị ya na ịgbachi nkịtị, nke imepụta ọnọdụ ka ndị Martians, ndị Selenite na ndị ọzọ bi na mbara igwe, nwee ebe anyị chere.
Olee uru okpukpe bara ma ọ bụrụ na ọ kwụsị ịdị na-eche ọdachi ihu?
Ruo mgbe ahụ aghọtaghị m na anọ m ebe a na-enweghị enyemaka na onye naanị m. Na mberede, dị ka ihe na-adapụ m, egwu jidere m.
O nwere ike ịbụ na mbuso agha nke ndị Martians ga-emesị baara anyị uru; ma ọ dịkarịa ala, ọ napụwo anyị obi ike dị jụụ n'ọdịnihu, nke bụ isi iyi nke mbibi.
Ihe ị ga-ekwu banyere onye ama ama mgbasa ozi redio Gịnị mere Orson Welles nke akwụkwọ a na October 30, 1938? Ọ bụ egwuregwu mmegharị, nke otu awa, gụọ ụdị akụkọ ikpeazụ nkeji. Ya mere jidere ndị na-ege ntị na onye ọ bụla kwere n'ezie mwakpo ndị ọbịa ahụ. Ọ nọgidere dịka oge redio dị ka akụkọ ihe mere eme dịka ọ na-enweghị ike ikwughachi ya. Na mmegharị ihe nkiri enwebeghị ike imeri ya.
Kachasị kpochapụwo, nke meriri Oscar maka nsonaazụ anya, sitere na 1953. Na nke kachasị dị ugbu a bụ nke Tom Cruise gosipụtara na 2005.
Agwaetiti Dọkịta Moreau
Anụmanụ nwere ike iwe iwe na aghụghọ, mana ọ na-ewe ezigbo mmadụ iji gha ụgha.
Anụtụbeghị m banyere ihe na-abaghị uru nke, n'oge na-adịghị anya, mmalite agbanwebeghị ịdị adị. Ma gị? Na ihe mgbu adịghị mkpa.
Mụ anụmanụ nwere ike ịdị aghụghọ ma nwee obi ọjọọ, mana ọ bụ naanị nwoke nwere ike ịgha ụgha.
Eziokwu ahụ bụ na ihe ndị ae kere eke bụ n'ezie anụ ọhịa na-adịghị ọcha, obere okwu efu nke ụdị mmadụ, mere ka m nwee obi abụọ banyere ihe ha ga-enwe ike, nke jọkarịrị egwu ọ bụla doro anya.
A hapụrụ m nke ochie site na 70s nke ha gbanwere Burt Lancaster na Michael York na 1977. Ma, e nwekwara nke na-mere fọrọ nke nta ka afọ 20 mgbe e mesịrị na Marlon Brando na Val Kilmer.
Nwoke anaghi ahu anya
Echiche ndị buru ibu na ndị na-adịkarị nghọta gaferela na-enwekarị mmetụta na-adịghị emetụta ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị karịa obere, echiche ndị ọzọ pụtara ìhè.
Mmadụ niile, ọbụlagodi ndị gụrụ akwụkwọ, nwere ihe nkwenkwe ụgha banyere ha.
Naanị m, ọ bụ ihe dị ịtụnanya na ntakịrị ihe nwoke nwere ike ime naanị ya! Zuru ntakịrị, mee obere mmebi, ọ bụkwa ebe ahụ ka ọ kwụsịrị.
Abụ m nwoke siri ike ma nwekwaa aka dị arọ; E wezụga nke ahụ, anaghị m ahụ anya. Obi abụọ adịghị ya na ọ nwere ike igbu ha abụọ ma gbanahụ ya ma ọ bụrụ na ọchọrọ. Ha kwenyere?
Na nke a m na-ewerekwa nnukwu Eluigwe Claude nke mere ka ihu na aru hu onye protagonist na kpochapu nke 1933. Ma enwerekwa ụtụ na ọdịiche dị iche iche na aha dị ka Nwoke Na-enweghi onyinyona Kevin anụ ezi n’afọ 2000. Karịsịa, usoro iri asaa site n'oge m bụ nwata nke m nwere nnukwu ịhụnanya maka otu masịrị m Ben murphy, ya protagonist.
Kedu nke ị ga-edebe?
Choise siri ike. Yabụ ihe kachasị mma ịme bụ ịgụ (ma ọ bụ lelee) akụkọ Wells ọ bụla.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » akụkọ sayensị emeghị eme » HG Wells. Icheta nnukwu onye edemede edemede sayensị England
Akwụkwọ sagas kacha mma
Akụkọ kacha mma n'akụkọ ihe mere eme